पराजयको कुण्ठा पालेर विकासे काममा अवरोध | Ekhabar Nepal
राजनीति जेठ १४ २०७६ ekhabarnepal
पर्चा काण्ड पछि मैले एकजना कांग्रेसप्रति समर्पित पेशाकर्मीसंग जिज्ञासा राखें– आखिर पाण्डेले किन यसो गरे ? उनको जवाफ थियो–नगरप्रमुखमा चुनाव हारेपछि विष्णु पौडेलकै कारणले हारें भन्ने परेको छ उनलाई । निश्चयनै यसमा सत्यता छ । यसको अर्थ उनले पौडेलको सहयोगमा चुनाव जित्न खोजेका हुन् ? राजनीतिमा के यस्तो सम्भावना हुन्छ ? हुँदैन । त्यसैले यो सव प्राकृतिक कुरा हो भनेर चित्त वुझाउनुभन्दा अरु विकल्प छैन पाण्डेसंग । यद्यपि चुनावको कुण्ठा पालेर असन्तुलित मनस्थिति वनेको हुन सक्छ उनको । यदि यसो हो भने यो मनोविज्ञानवाट टाढै रहनु उचित हुन्छ । विगतमा पाण्डेले सरल र सस्कारयुक्त पहिचान् वनाएका हुन् । उनको अटल निष्ठालाई सम्मान गर्नैपर्छ । उनले प्राप्त गरेको मतलाई पनि सम्मान गर्नैपर्छ । पराजित भएपनि उपमेयरको तुलनामा थोरै मतले पराजित भएकाले उनी लोकप्रिय थिए भन्ने संकेत पनि गर्छ । त्यसैले त्यो पहिचानलाई जोगाउने चुनौति छ उनीमाथि । यस्तै अराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने हो भने पहिचान गुम्न वेर लाग्दैन । एकजना मित्रको हैसियतले मेरो सुझाव यही हो । आगे जो इच्छा । भनिन्छ नि भिरवाट पल्टने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिदैन ।